नेपालमा ३९ लाखजनामा कोरोना संक्रमण भइसकेको एक अध्ययन प्रतिवेदनको निष्कर्ष - Synergyfm
२५ फाल्गुण २०७७, मंगलवार | Mar 09, 2021 | 09:56:08
नेपालमा ३९ लाखजनामा कोरोना संक्रमण भइसकेको एक अध्ययन प्रतिवेदनको निष्कर्ष
मंसिर १९,चितवन । स्वास्थ्य मन्त्रालय र विश्व स्वास्थ्य संगठन सम्मिलित एक विज्ञ टोलीले गरेको सर्वेक्षणले दुई महिनाअघि नै देशको १३ प्रतिशत जनसंख्या संक्रमित भएको देखाएको छ । सेप्टेम्बर अन्तिम साता गरिएको सर्वेक्षणको प्रतिवेदन विज्ञ टोलीले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा बुझाइसकेको छ । तर, उक्त प्रतिवेदन गोप्य राखिएको छ । कुल जनसंख्याको कति प्रतिशतमा संक्रमण भयो भन्ने जानकारी प्राप्त गर्न सर्वेक्षण गरिएको थियो । सर्वेक्षण टोलीमा नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का अनुसन्धानकर्ता डा. मेघनाथ धिमालसहित डा. जनक कोइराला, डा. गुणराज लोहनी, डा. सुरेश तिवारी र विश्व स्वास्थ्य संगठनका विज्ञहरू थिए ।
सर्वेक्षणमा रगतमार्फत एन्टिबडी अध्ययन गरिएको थियो । त्यसयता संक्रमण थप फैलिएकाले यो संख्या अझै बढेको अनुमान मन्त्रालयका अधिकारीहरूको छ । इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका एक अधिकारीका अनुसार हिमाल, पहाड, तराई तीनैक्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने गरी सर्वेक्षण गरिएको थियो । मनाङ र मुस्ताङबाहेक ७५ जिल्लाबाट ६ हजार पाँच सयजनाको नमुना संकलन गरिएको थियो । केही दिनभित्रै मन्त्रालयले रिपोर्ट सार्वजनिक गर्ने महाशाखाका निर्देशक डा. वासुदेव पाण्डे बताउँछन । केन्द्रीय तथ्यांक विभागका सूचना अधिकारी तीर्थराज चौलागाईंका अनुसार सेप्टेम्बर अन्तिमसम्म देशको कुल जनसंख्या करिब तीन करोड एक लाख एक सय ३० रहेको प्रक्षेपण थियो । उक्त आँकडालाई आधार मान्दा कुल जनसंख्याको १३ प्रतिशत अर्थात् करिब ३९ लाखजनामा कोरोना संक्रमण भइसकेको अध्ययन प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । थप अध्ययनपछि मात्र प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने पक्षमा मन्त्रालय देखिन्छ । त्यसअघि प्रतिवेदनमा उल्लेखित आँकडा सार्वजनिक नगर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको सर्वेक्षणमा सहभागी विज्ञहरू बताउँछन ।